Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Fraport AG waxay si guul leh u dhigeysaa warqad ballanqaad ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Fraport AG si guul leh ayey u dhigtaa warqadda ballanqaadka.
Arrinta xaashida ballan -qaadka ee maanta waxay kordhineysaa xaddiga maaliyad cusub oo ay soo aruurisay Fraport AG muddadii 2021 -ka oo ay gaartay ku dhawaad ​​2.9 4.5 bilyan. Markaa, Kooxdu waxay hadda haysataa wadar ahaan € XNUMX bilyan oo ah maaliyadaha dammaanadda iyo sidoo kale khadadka deynta ee la hubo oo aan la adeegsan.
Waxaa la soo bandhigay muddo shan iyo toddoba iyo bar iyo bar ah, qoraalka waxaa lagu soo saaray afar qaybood.
Sababtoo ah dalab xoog leh, wadarta mugga arrinta ayaa si weyn looga soo saaray muggii markii hore la saadaaliyay ee ahaa 200 milyan oo euro.
Landesbank Hessen-Thüringen iyo UniCredit Bank AG waxay u dhaqmeen sidii qabanqaabiyihii hoggaaminta wadajirka ahaa ee arrinta amaahda qoraalka ee Fraport.
Fraport AG waxay ku guulaysatay inay dhigto warqad ballanqaad ah oo dhan million 500 milyan maanta (Oktoobar 21). Waxaa la soo bandhigay muddo shan iyo toddoba iyo bar iyo bar ah, qoraalka waxaa lagu soo saaray afar qaybood. Sababtoo ah dalab xoog leh oo ka yimid maalgashadayaasha Jarmalka iyo kuwa caalamiga ah, mugga arrinta guud ayaa si weyn looga soo qaaday muggii markii hore la saadaaliyay ee ahaa million 200 milyan. Arrinta waxaa lagu sameeyay dhammaadka hoose ee sicirka qiimaha.
Shirkadda Fraport AGXubin ka tirsan guddiga fulinta ee maaliyadda iyo xakamaynta (CFO), Prof. Dr. Matthias Zieschang, ayaa yiri: “Waxaan aad ugu faraxsanahay dalabka aadka u sarreeya ee ka yimid maalgashadayaasha warqadda ballanqaadkayaga. Kani waa cod kale oo cad oo kalsooni ah oo ku jira Kooxda Fraport. Waxaa intaa dheer, waxay xaqiijineysaa inaan ku soconno waddada saxda ah. Waad ku mahadsan tahay maareynteena xisaabaadka joogtada ah, waxaan ka gudubnay heerkii ugu sarreeyay ee cudurka faafa ee coronavirus - waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan sameyno maalgashiyada lagama maarmaanka u ah mustaqbalka. ”
Arrinta xaashida ballan -qaadka ee maanta waxay kordhineysaa xaddiga maalgelinta cusub ee ay soo aruurisay Shirkadda Fraport AG inta lagu jiro 2021 illaa ku dhawaad ​​€ 2.9 bilyan. Markaa, Kooxdu waxay hadda haysataa wadar ahaan € 4.5 bilyan oo ah maaliyadaha dammaanadda iyo sidoo kale khadadka deynta ee la hubo oo aan la adeegsan.
Bangiga Landes Hessen-Thüringen iyo UniCredit Bank AG waxay u dhaqmeen sidii qabanqaabiyaha hogaaminta wadajirka ah ee arrinta amaahda qoraalka ee Fraport.